Wasiirka Qorsheynta Soomaaliya oo Kuwait uga qeyb-galay shirka qorsheynta dalalka Carabta. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Wasiirka Qorsheynta Soomaaliya oo Kuwait uga qeyb-galay shirka qorsheynta dalalka Carabta.
Wasiirka Qorsheynta Soomaaliya oo Kuwait uga qeyb-galay shirka qorsheynta dalalka Carabta.
Wasiirka wasaaradda Qorsheynta Xukumadda Federaalka Soomaliya Jamaal Maxamed Xasan oo safar shaqo ku jooga dalka Kuwait ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha Diiwaanka ee dalkaasi, isagoo gaarsiyay dhambaal uu ka siday madaxdwynaha Jamuuriyada mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wasiirka ayaa warbixin ku saabsan horumarka dalka ka jira siiyay Sheekh Cali Jaraax Al Sabaah wasiirka arrimaha diiwaanka ee Dalka Kuwait, sidoo kale waxaa la isku soo qaaday sidii dowladda Kuwait ay qeyb mug leh uga qaadan lahayd horumarka Soomaaliya gaar ahaan dhinaca Maalgelinta iyo kaabidda dhaqaalaha dalka.
Sheekh Cali Jaraax Al Sabaah, ayaa ballan qaaday in dhambaalka uu gaarsiin doona Amiirka dalka Kuwait, waxaa uu xusay in Soomaaliya ay ka taageeri doonaan mashaariicda badan oo dhanka horumarka ku saabsan, iyadoo loo soo marsiinayo Sanduuqa Horumarinta dhaqaalaha dalka Kuwait.
Wasiirka Qorsheynta Soomaaliya ayaa dalka Kuwait uga qeyb-galaya shirka qorsheynta waddamada Carabta.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo gaaray deegaanka Carmo ee gobolka Bari
Next articleWaxqabadka Xukuumadda Soomaaliya 04-10 Jan 2018.